ဒီဇင်ဘာလ 2017 | တစ်ဦးကရထား Save
လ: ဒီဇင်ဘာလ 2017
နေအိမ် > ဒီဇင်ဘာလ 2017
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ တစ်ဦးကရထားစီးခေတ္တနားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းအားပေး, ပြတင်းပေါက်ကထွက်ကြည့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ယူပြီး၏ဇိမ်ခံတန်ဖိုးထား. ခရီးသွားလာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းအင်ကိုတက်ယူနိုင်ပါသည်, ရှည်လျားသောမီးရထားခရီးပိတ်ထားခြင်းနှင့် unwind ဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်. အများဆုံးလုပ်ပါ…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ရထားအားဖြင့်ခရစ္စမတ်စျေးကွက်များသငျသညျဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးမြို့တတစ်ခုခရီးစဉ်နှင့်အတူခရစ္စမတ်စိတ်ဝိညာဉ်သည်သို့အရကူညီပေးသည်. မီးရထားဖြင့်ခရီးသွားခြင်းနှင့်အစဉ်အဆက်အများဆုံးမှော်သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအောင်! အတော်များများကဘူတာမြို့လယ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာတည်ရှိသည်, အားဖြင့်ခရီးသွားအောင်…
10 တစ်သက်တာ ခရီးစဉ်များ
12 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းများ